RASMI: André Silva oo ku biiray kooxda AC Milan + Sawirro & Muuqaal – Gool FM
RASMI: André Silva oo ku biiray kooxda AC Milan + Sawirro & Muuqaal
Raage June 12, 2017
(Milano) 12 Juunyo 2017 – AC Milan ayaa soo dhamaystirtay saxiixa qannaaska reer Portugal ee Andre Silva oo ay FC Porto kasoo siisteen €38m oo bareemiyo lagu daray.
Silva ayaa ku baasay tijaabadii caafimaadka oo uu saaka bilaabay, isagoo qalinka ku aasay heshiis 5 sano, iyadoo heshiiska Porto iyo Rossoneri uu kaliya soo daahiray fiidnimadii xalaytoole oo Axad ahayd, iyadoo aan xitaa la ogayn imaanshiyaha 21-jirkan ee Milano.
Weeraryahankan ayaa wacdaro dhigay kal-ciyaareedkii tegey ee 2016-17, isagoo 21 gool ansixiyay 44 kulan, isagoo sidoo kale weerarka Portugal kula jaal ah Cristiano Ronaldo, isagoo 7 gool dhaliyay 8 kulan oo uu saftay.
Ronaldo ayaa sidoo kale laacibkan ku tilmaamay ninka isaga dhaxli doona, Silva ayaa noqonaya laacibkii 4-aad ee AC Milan kusoo biira xagaagan, kaddib Mateo Musacchio, Franck Kessie iyo Ricardo Rodriguez.
Halkan ka DAAWO saxiixa laacibka….
Ett inlägg delat av AC Milan (@acmilan) Jun 12, 2017 kl. 7:47 PDT
Waa kuma tababaraha cusub ee Roma? kooxda reer talyaani oo ku dhaw inay magacaawdo tababare cusub
Gianluigi Donnarumma oo berri jawaab siinaya AC Milan